Kiobà: Mitodika Any Amin’ny Hoavin’ny Kiobà Ny Lahatenin’ny Papa Benoà XVI · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Marsa 2012 4:41 GMT
Vakio amin'ny teny English, македонски, Aymara, 简体中文, 繁體中文, Español
Tao amin'ny firenena Karaiba, lohahevitra malaza tao amin'ny Twitter ny fahatongavan'i Papa Benoà XVI tao Santiago ao Kiobà. Raúl Castro sy ny anaran'ny faritany Andrefana no tena anisan'ny lohahevitra be mpitsidika indrindra omaly atoandro.
Taorian'ny fahatongavan'i Papa, nanao lahateny fiarahabana azy ny Filoha Raúl Castro:
Am-pitiavana sy am-panajana no andraisan'i Kiobà anao, voninahitra ho an'i Kiobà izao fahatongavanao izao. Fiarahamonina miray hina sy nianatra ary niezaka hatrany nandala ny fahamarinana sy nanao ezaka marobe no mandray anao eto.
Nandritra izany, nofaranan'i Benoà XVI toy izao ny lahateny fiarahabany:
Papa Benoà XVI tamin'ny fahatongavany tao Kiobà. Sary avy amin'i Ismael Francisco. Nahazoana alalany avy amin'ny Cubadebate ny famoahana indray ny sary.
Resy lahatra aho fa mitodika any amin'ny hoaviny i Kiobà amin'izao fotoan-dehibe manokana manatantara izao. Ary amin'izany, mitolona izy mba hanavao sy hampivelarana ny faravodilanitra amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa ara-panahy sy ara-maoraly izay nanefy ny tena maha-izy azy.
Navoakan'ireo mpiserasera amin'ny tranokala ny hira re noredonina tao Plaza Antonio Maceo, ao amin'ny faritanin'i Santiago, miakanjo fotsy ambony avokoa ny ankamaroan'ny olona tonga tao.
Raha tsy mankany Camaguey ny Papa, andehanako avokoa izay rehetra halehany.
Tao amin'ny Facebook consult, tanora marobe no naneho ny fijeriny mikasika ny fitsidihan'ny Papa.
Araka ny filazan'ny mpamahana bolongana Olemis Lang:
Mampitaha ny fitsidihan'ity Papa ity tamin'ny an'i Joany Paoly II aho ka ny fehiny dia malaza kokoa ny an'ity farany ity
Amaya Terry [es] manamarika fa misy ny “fitantarana be loatra avy amin'ny haino aman-jery rehetra”. Tahaka izay fitsidihan'i Joany Paoly 14 taona lasa izay, navoitrany fa:
Tsy dia manantena zavatra maro loatra amin'ity Papa ity aho, tsorina fa tsy dia mitera-pifaliana ho ahy izy; saingy any anaty lalina any misy zavatra antenaina hatrany. Tsy ho tontosan'ity Papa ity mihitsy izay fientanetanana vitan'i Joany Paoly faharoa, eny fa na dia mirehareha avokoa ary isika miarahaba azy ireny tonga soa ao anatin'ny “fitiavana sy fifanajana.” Tsy azo resena ny fihetsika maha-te-ho-tia navelan'i Joany Paoly Faharoa!!!
Indro atolotray ny lahatsarin'ny fotoana voalohany indrindra nandalovan'ny Papa tany Kiobà.